Soo-saareyaasha jiifka ee maqaarka, soo saaraha korantada korantada iyo soo-saareyaasha korantada ee PPR-yada ah | Shingfong
Waxaa la aasaasay 1996, Shingfong oo ah soo saaraha xirfadeed ee PVC Trunking, PVC Conduit, PPR Pipes and fittings related
Awood wax soo saarka
Pvc arc sagxadda sagxadda
PVC Word Wershadaha
PVC Trapezoid Galliing
Ppr kulul iyo tuubooyinka biyaha qabow
Pvc korantada korantada
PVC Proght rogroxan kara
Pvc qabow daboolan
PVC iyo PPR Qalabka
Soo saaraha xirfadleyda ah ee
PVC jirridda, PVC-gu, PVC tuubbada, qalabka la isku daro.
Waa waxyaalaha yar ee isbedel ku dhaca
Pvc jirridda& PVC
Xirfadlaha tayada leh ee PVC
Shingfong tayada PVC ee tayada PVC-gaXirfadlaha PVC PLCINGERS Soo-saareyaasha.Waxaa laga soo saaray si waafaqsan shuruudaha heerarka Heerarka Tayada Caalamiga ah, iyo tayadeeda ayaa la dammaanad qaadi karaa maxaa yeelay waxay soo martay shahaadooyin badan oo tayo leh.Dheecaanka PVC ee ShingFong Randing ayaa ah xalka ugufiican ee loogu talagalay dhowr mashruucyada maaraynta maareynta fiilada ee fiilada, oo ay kujirto rakibida gudaha iyo ganacsiga. Daawashada xumbada ee xumbada lagu dhaqo ayaa la heli karaa si loo nuugo meelaha aan loo baahnayn oo aan sinnayn. Waxaa la bixiyaa in ka badan 200 oo cabir oo kala duwan iyo dhumuc weyn. Waxaa lagu heli karaa waxyaabo badan oo qalab ah iyo qalabyo. Isticmaalka jirriddan, intaa waxaa sii dheer, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo jaranjarada iyo darbiga ku lifaaqa xiriirada codsiyada qaarkood.
Intro in loo yaqaan 'PVC' ee Weyn ee PVC-ka qabow ee PVC oo leh qiimayaal wanaagsan
Shingfong Intro Pipe-ka PVC-ka qabow ee PVC oo leh Shingfong oo wanaagsan, Shingfong waxay leedahay 30 nooc oo ah khadadka wax soo saarka ee mataanaha ah, awoodda wax soo saarka ee sanadlaha ah waa 20000Tons.Raadi PVC-da BILAASH PIVC-Burburinta BLDESS? PVC PVC PVC PVC-ka ee foodda-foosha oo qabow, waxaan ku takhasusay tuubooyinka biyaha kulul ee PPR iyo biyaha qabow, hadda jeeg!
Xasaasiyadda PVC ee tayo sare leh ee PVC-ka
Shingfong Pipe Pipe Pipe Pipe Patored - Siuuo Shingfong balastik balaastigga balaastigga ah ee Co., Ltd., Shingfong waxay leedahay tirada ugu badan ee cabirrada jirridda PVC, min min. 10x10mm illaa 200x100mm. In ka badan 200pcs cabbir kala duwan iyo dhumuc weyn.PVC Singiait
Shiinaha oo tayo sare leh ee PVC-ka
Shingfong Shiinaha oo tayo sare leh ee PVC-kaWax ka weydiiso khadka tooska ah! Xirfadlaha PVC PVC-ka Soo-saarka PVC Soosaarka Dabaasha, faahfaahinta ku saabsan pvc arc sagxadda pvc arc, ugu fiican pvc pvc by autfong balaastka balaastigga ah
Soosaarayaasha Arm ee loo yaqaan 'Arc Groove' ee ka soo baxa Shiinaha
Shingfong oo loo habeeyay Argigyada Sing Shiinuhu, Shingfong waxay dabooshaa aag 25,000 m², waxaa ku jira 2 dhirta proge, 3 bakhaar oo sidoo kale dhismaha xafiiska.Sharraxaadda Wax soo saarka 1) Qalabka: PVC. 2) Heerka Tijaabada: EN 61357: 2007. 3) Riperence: dusha jilicsan oo aan lahayn wax xoqid ah, midab wanaagsan oo dhalaalaya, oo dhalaalaya, baakado wanaagsan. 4) Isticmaal: Wireynta gudaha, ilaalinta siligga ka yar 1200V. 5) Saamaynta: Ka dib isticmaalka, si sahlan oo si fudud oo u rakibaya, oo ku habboon in lagu kalsoonaan karo dayactirka iyo raadinta iyo is-weydaarsiga. 6) Nolosha isticmaalka caadiga ah waxay noqon kartaa ilaa 50 sano. 7) Adeegso: koronto ama dhismo. Aad u fiican oo loogu talagalay saqafka dabaqa oo ku habboon meel kasta oo dowladeed, loo isticmaalo rakibidda fiiloyinka taleefanka, fiilooyinka iyo fiilooyinka shabakadda ee hoos yimaada. Ka dhigista xulasho caan ah oo loogu talagalay hoolka bandhigyada, xafiisyada tafaariiqda iyo nabaryada jimicsiga iyo jimicsiga, bakhaarada waaxda, suuqyada waaxda, suuqyada waaweyn iyo meelaha kale ee dadweynaha. Astaamaha ugu waaweyn 1) Qarqitaan: Haddii aad foororsato, ma fududaan karto inaad jabto. 2) Advedness: Kartida cadaadiska, iska caabin saamayn sare leh. 3) Caabbi-celinta Dabka: Dib-u-dhigga PVC Resin, oo ah dib-u-dhac sare, si dhakhso ah u bakhtiiya. 4) iska caabbinta: Qoyaanka, aashitada iyo iska caabbinta alkali, taas oo xaqiijinaysa kharashka dayactirka hoose iyo nolosha waxqabadka dheer. 5) Aan-Anshal ahayn: Daynta Korantada ee Wanaagsan, kuwaas oo iska caabiya 25kv korantada, hurinta nidaam nabdoon. 6) Rakibaadda: fududahay in la furo oo la furo, riixitaan ku habboon, oo lagu rakibay sibidhka xallinta iyo xargaha lagu soo biiro.
Maskaxda PVC PLC ee soosaarayaasha
Shingfong Group pvc-ka PVC-ka ee loo yaqaan 'PVC', Shingfong ayaa la aasaasay 1995, waxay leedahay 26 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan soo saarista lacagta PVC, PVC Singiroolka PVC iyo tuubada biyaha ee PVC, aaladaha qabow.PVC sagxadda dhulka
Warshadda ugu fiican ee PVC PVC ee ku dhegan oo leh sicirka warshadda adhive - Shingfong
Warshadda ugu fiican ee PVC-ka Shiinaha ee Shiinkada PVC-kaFaahfaahinta 1) Maaddada: Qalabka cusub ee PVC 2) Heerka: IEC 610844-2 3) Upricence: jilicsan, oo aan caadi ahayn, oo ah baakado qurux badan oo qurux badan. 4) Midabka: Midabka oo saafi ah, oo aan lahayn qulqulka iyo gabowga. 5) Urta: udgoon la'aan, bey'ad. 6) Isticmaal: Wireynta gudaha, ilaalinta siligga ka yar 1200V. 7) Saamaynta: Kadib isticmaalka, si sahlan oo si fudud oo si fiican u rakibaya, ku rakibida si ku habboon, ku habboon dayactirka iyo raadinta iyo is-weydaarsiga. 8) Nolol Lifetime: Shingfong Nooca PVC Pipes iyo jirridda PVC waa ka hortagga dadka gabowga, nolosha isticmaalka caadiga ah waxay noqon kartaa ilaa 50 sano.
Intro Intro ee loo habeeyey isbarbardhiga PVC ee soosaarayaasha ka soo baxa Shiinaha Shingfong
Shingfong af-indheeynta isbarbardhiga PVC ee la soo saaray ee soosaarayaasha Shiinaha Shingfong, Shingfong waxay leedahay koox karti ah oo r&D, waxay sharaf u leedahay in la helo shahaadada cas-farsamada farsamada ee farsamada ee Hi-Techprise.Raadinta PVC isbarbardhiga jir-gooyeyaasha? Shingfong ku takhasusay caadooyinka warshaddu waxay sameysay jirridda PVC, hubi hadda!
Loo yaqaan 'PVC pastor pass pass propres' ee Shiinaha
Pvc qolkaShingfong-ka ee loo yaqaan 'PVC' ee soo-saareyaasha 'pvc'
Pipe-ka ugu Wanaagsan ee Warshadda Biyaha Qabow iyo Kul kulul Qiimaha | Shingfong
Xirfad xirfadeed oo xirfadle ah oo ah soosaarid biyo qabow iyo kulul, faahfaahinta ku saabsan tuubada PPR-ga ee biyo qabow iyo kulul
Tuubbada sadarka oo sadarka ah oo leh qiime wanaagsan - shingfong
Tube-ka sadarka xargaha ee Shingfong oo leh qiime wanaagsan Warshaddayadu waa u dhowdahay Dekadda Guangzhou Dekadda iyo Shenzhen Dekadda.1) Shingfong PVC Condorical waa tuubo loo adeegsaday in lagu ilaaliyo oo loo maro jidadka korantada ee dhismaha ama qaab dhismeedka aan loo dhisin. 2) Shingfong PVC waxay leedahay laba nooc: xargaha adag iyo kondamida dabacsan. 3) Singfong PVC waxay siisaa difaac aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa ku lifaaqan wadeyaasha, qoyaan, qoyaan, iyo tuubooyin kiimiko ah. 4) Singfong PVC waxaa lagu rakibi karaa dhulka hoostiisa u dhexeeya dhismayaasha, qaabdhismeedka, ama aaladaha loo oggolaado rakibidda korantada iyo fiilooyinka isgaarsiinta. 5) Waxaa jira qalab koronto oo loogu talagalay oo loo isticmaali karo in lagu xiro marinka PVC ee PVC. PVC Proples Party 1) Saamaynta iyo Cadaadiska Cadaadiska; 2) lagu aasi karaa si la taaban karo; 3) gabowga gabowga iyo ka xor ah midabka isbedelka; 4) Dambid, iska caabbinta aashitada iyo alkali; 5) Sida ugu dhakhsaha badan ee dabka ka tagaya, dabka ku yaal Shingfong PVC wuxuu si dhakhso leh u bakhtiyaa; 6) Dhinacyo kaladuwan oo la heli karo; 7) Adeegga OEM iyo ODM ee la bixiyo; 8) Laba nooc oo waaweyn: PVC Tooska ah ee PVC, PVC qabow tuubbada tuubbada.
Soosaarayaasha Shiinaha ee PPR Tube - Shingfong
Soosaarayaasha Shiinaha ee Shingfong Shingfong SingFaa'iido: (1) iska caabin heerkul sare ah: Heerkulka ugu sarreeya ee shaqada ee joogtada ahi waa ilaa 70 digrii Celsius, Heerkulka ugu badan ee ugu badan waa ilaa 95 digrii Celsius. (2) Ilaalinta kuleylka: Xadgudubka kuleylka hooseeya ee kaliya 1/1500 oo ah tuubbada naxaasta ah, iyo 1/250 oo ah tuubada birta. Aan sun ahayn (3) Xariir adkeysi: Ka hortag arrimaha kiimikada ama saxamada kiimikada ee elektiroonigga ah. (4) Qiimaha rakibaadda hoose: Miisaan fudud iyo fududeynta rakibaadda waxay yareyn kartaa kharashaadka rakibaadda illaa 50% ee nidaamka tuubbada birta. (5) Awoodda socodka sareeya: Darbiyada gudaha ee jilicsan ayaa ka dhasha in luminta cadaadiska hoose iyo mugga ka sareeya tuubooyinka birta ah. (6) Nolol dheer: In ka badan 50 sano xaaladaha caadiga ah. (7) dib loo warshadeeyo iyo jawiga jawiga leh.
PVC Trapezoid ee tayo sare leh ee PVC
PVC Trapezoid ee tayo sare leh ee PVC• Dhererka caadiga ah: 2000mm• Midabka caadiga ah: Caddaan• Bixi difaac weyn oo fiilooyin ah• Si naxdin leh u adkeyso iyo is-badbaadinta is-badbaadinta• Maaddada bilaashka ahMuujinta• Xirmooyinka isku-dhafka ah ee aan isku dhafaneyn iyo naqshadaha qaaska ah ee caymiska ah ayaa caymisa daboolka casharka mar dambe lagu rakibi doono ama inta lagu gudajiro gariirka;• geesaha jilicsan iyo cidhifyada aan ka baqin xiirashada ama ka xanaajin karaan gacmaha;• Qalabka 'PVC' ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'PVC' ee loo yaqaan 'PVC' ee loo yaqaan 'PVC' PVC-ka bilaashka ah ee loo yaqaan 'pvc'
Xirfadlaha PVC Arc sagxadda sagxadda dhulka oo leh soosaarayaasha qolka
Xirfadlaha 11 pvc arc sagxadda sagxadda sagxadda leh ee soo-saareyaasha qolka.Hawsheeda waxay ku jirtaa dheelitirka saxda ah ee tayada iyo nolosheeda adeegga.Shingfong PVC sagxadda sagxadda sagxadda leh oo leh cajalad laba laab oo tayo sare leh, oo lagu fududeeyo dabaqa dabaqa oo joogto ah si loo saadaalinayo iyo si looga fogaado meelaha dadweynaha, gaar ahaan meelaha laga iibsado, sida suuqyada wax laga iibsado, isbitaalada, iyo saldhigyada.Qeybta hoose ee weelka waxaa lagu dhejin karaa cajalad labanlaab ah ka dibna si fudud dabaqa u adkee.
Ugu fiican PPR-ka kulul ee PPR iyo Biyaha ee Qabow
Ugu fiican PPR-ka kulul ee PPR iyo Biyaha ee Qabow.Alaabtaani waa aamin in la isticmaalo. Waxaa loo soo saaraa si waafaqsan biyaha cabitaanka biyaha la adeegsaday.1. ISTICMAALKA ECO-saaxiibtinimo iyo aaminka ah, badbaadinta tamarta2. Cadaadiska heerkulka sare, xidho iska caabbinta, iska caabinta saameynta saameynta leh3. Miisaan fudud, nidaam hoose iyo kharashyo dayactir4. Nolosha adeegga wanaagsan
Ugu fiican pvc-ga ugu fiican oo leh qayb ka mid ah
Ugu fiican pvc-ga ugu fiican oo leh qayb ka mid ah qeybiye.Shayga ayaa lagu soo ururiyey tayo sare.ILMAGE MENGING PVC PHV-ga waa hal qol oo rikoor ah,kaas oo loo qaybin karo iyada oo loo adeegsado xariiq qaybsi ah si loo habeeyo awoodda, xogta iyo fiilooyinka isgaarsiinta. Boosaska meelaha loo habeeyo ee meeraha ee loo qoondeeyo waxay u oggolaadaan jirridda in loo kala qaybiyo laba, saddex ama afar qaybood oo ku xidhan shuruudaha rakibaadda.
Xirfadlaha PVC PLC oo leh cajalad cajalad leh
Xirfadlaha PVC-ga ee PVC oo leh soosaarayaal cajalad leh.Mabaadi'da naqshadeynta ee ku lug leh dhinacyada soo socda. Mabaadi'daani waxaa ku jira isku-dheelitir qaab & muuqaal ah, summeretry, midnimo, noocyo kala duwan, heer sare, iyo saamiga, iyo saamiga.Cajaladdaan laba-geesood ee labajibbaarani waa aqoon sare, ashyaa'da cayriin ee cajalad laga soo dejiyo koonfurta Kuuriya. Waxaa jira midab badan oo la doorto, sida cagaar, buluug, casaan, iwm.Waxaan leenahay koox shaqaale hibo leh oo aan ku dhejinno cajaladda cajaladda ee ku dhagan tahay jirridda PVC, waxaan ku dhammeyn karnaa alaabta waqtigii loogu talagalay. Waqtigan mashquul ah, waxaan awoodnaa inaan dammaanad qaadno waqtiga gaarsiinta. Nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay jirridda PVC oo leh cajalad dhejis ah oo labalaab ah.
Qiimaha Warshadaha PVC ee ugu fiican -
Qiimaha Warshadaha PVC-ga ugu fiican -.Si taxaddar leh ayaa loo horumariyey. Waxaa qabta kooxda R & D oo arrimo badan ka qaadata tixgalinta qiiqa ka mid ah qiiqa shucaaca, u nugul, ESD (dheecaan electrostatic ah), korantada korantada, iwm.PVC Constiiidur waxay leedahay cabirka soo socda:10mm PVC (PVC PVC), badiyaa loogu talagalay isticmaalka fudud, waxaan sidoo kale ugu yeernaa tuubbada.16mm, waxaa jira midab gaar ah oo loo heli karo biibiile PVC, sida caddaan, cawlan, buluug, cagaar, madow, jaalle, iwm.20mm, cabirka ugu caansan, si fiican ayey ugu iibiyaan adduunka oo dhan25mm, moodalka kulul ee iibka, waxay leedahay qalab laxiriira si ay u dhigmaan32mm, tayo wanaagsan40mm,50mm,60mm,Nala soo xiriir haddii aad xiisaynayso badeecadeena: dhoofinta@shingfong.com
Fiidiyowgaan wuxuu kaa dhigi doonaa tuubbada kumbuyuutarka ee PVC oo leh god god ah
Fiidiyowgaan wuxuu kaa dhigi doonaa tuubbada kumbuyuutarka ee PVC oo leh god god ahFiidiyowgaan, waxaan ku tusi doonaa fiidiyowgaan inuu kaa dhigi doono tuubada kumbuyuutarka ee PVC oo leh god god ah. Ku raaxayso oo iska qor muuqaalkan fiidiyowgan!Sixir Shingfong balastic balaastig ah oo caag ah Co., Ltd. waa soo-saare xirfadle ah oo ku hawlan agabyada polymer ee sareeya, alaabooyinkeeda ugu badan ee PVC-ka, PVC-da PVC-Ups Pipes, tuubooyinka biyaha ee PVC-udgoonyada iyo waxyaabaha laxiriira.Shingfong waxaa la aasaasay 1996, oo ku yaal lambarka 68, Wadada Qingdong, Degmada Dongdong, Gobolka Magaalada Siuua, Gobolka Guangdong, ayaa daboolay aag 38.8 acres ah. Shingfong waxay leedahay 30 nooc oo khad ah oo wax soo saarka otomatiga ah, awoodda wax soo saarka sanadlaha ah waa 30,000 tan, oo leh qiimaha wax soo saarka ee 200 milyan ama ka badan.Email: Dhoofinta@shingfong.comI RAACA:Hubi websaydhkayga: https://www.shingfong.comFacebook: https://www.facebook.com/1122491706355555YouTube: https: https://www.youtube.com/channel/channel/unine3xabptv6vuzchwrtvv0gLinkedIn: https: https://www.linksin.com/in/sf-pvvc-thunking-condount/Fiidiyowgaan wuxuu kaa dhigi doonaa tuubbada kumbuyuutarka ee PVC oo leh god god ahFadlan nala soo xiriir isla markaaba haddii aad xiisaynayso.# Video # PCV # biyomareenka # biibiile # godka # balan qaadayo # SF # PVC # Trunking # & # biyomareenka # SFPVCTrunking & biyomareenka # 1 / 2drivesocket # Flexi-TilesInterlockingPVCFloorTiles # conduitologist # Checklistofelectricalpipeswork # roundpopsocketwholesale # chennaiuPVC # parallelconduitkicks # Irwinsocketadapter
Waxaa caado u ahayd tayada sare ee cajalad isku dhafan oo ku dhejinaya pvc galka pvc ee soosaarayaasha Shiinaha
Shingfong-ka waxay u habeysay tayo sare oo ah cajalad dhagarta ah ee labanlaab ah oo loogu talagalay soosaarayaasha pvc ee soosaarayaasha ShiinahaKuwaani waa xabagta gaarka ah ee loo isticmaalo tuubada xargaha, waxaa loogu talagalay in lagu dhajiyo si adag si loo ilaaliyo kuwa shaashadda leh.Waxaa jira midabyo kala duwan oo loo heli karo daboolka cajalad dhejis ah, sida caddaan, casaan, buluug, cagaar, jaalle, oranji, casaan, regi, iwm.Midabka loo habeeyay waa la aqbali karaa.Midabka cajaladdu badanaa waa caddaan ama madow.Ballaca caadiga ah waa min. 7mm ilaa ugu bad. 85mm.Nala soo xiriir haddii aad xiisaynayso alaabooyinkayaga: dhoofinta@shingfong.com
Waxqabadka aad ku kalsoonaan karto
Sifus Shingfong balaastigga balaastigga ah ee Co., Ltd.
Shingfing the poioner ee fiilada korantada& Si aad u fiiriso tuubbada, tuubbada ku-haynta, tuubada biyaha, tuubbada daadinta iyo qalabka la xiriira. Waxaa la aasaasay 1996, waxaan ku iibinaynay Pipe-ka PVC-ga iyo in ka badan 150 magaalo oo ka socda guriga oo aan ku sii jirno daacadnimada iyo tayada wax soo saarka la isku halleyn karo. Faa'iidada Shingfong: Waxaan u heellan nahay inaan ka dhigno wax soo saarka tayo sare leh qiimaha dhaqaale si aan kuugu oggolaano inaad ku tartanto suuqaaga. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka dhigno badeecada si aan u buuxinno faahfaahintaada. Waxaan sameyn karnaa sumad in la calaamadeeyo badeecada kaas oo ka caawin kara magacaaga noogu hel suuq geynta. Faahfaahin ballaaran oo faahfaahsan oo ah tilmaanta xad-gudubka, qanjidhada a ...
Waxaa la aasaasay 1995, Shingfong waxay leedahay 26 sano khibrad xirfadeed oo ku saabsan wax soo saarka PVC jirridda iyo taranka PVC
Awoodda wax soo saarka sanadlaha ah waa 30,000 tan oo tan ah, oo xamuul ugu yaraan 50x40gp ah bil kasta
Wuxuu daboolayaa aag dhan 25,000 mitir oo laba jibaaran, 2 aqoon-isweydaarsi iyo 3 waxyaabo ay wax yar yihiin, 30pc khadadka dib-u-soo-saarka tooska ah
Xalka caadiga ah ee OEM / ODM. Adeegga naqshadeynta bilaashka ah ee xirxiran.
Adeeg, tayo & daacadnimo
Shingfong waxaa ka go'an inay had iyo jeer siiso macaamiisheeda iyadoo la awoodi karo, tayo sare leh iyo adeeg macaamiil aad u fiican. Adeegyada hal-joog ah, oo ay ku jiraan adeegga gawaarida sida gorgortanka ganacsiga, naqshadeynta qorshaha iibka, Falanqaynta Suuqa, Adeegga Iibinta ee ka dib sida hagida rakibaadda iyo dammaanadda tayada leh, adeeggan ayaa la bixiyaa inta lagu gudajiro howlaha oo dhan.
Falsafada Shingfong Falsafadda: Aaminnimada, faa iidada labada dhinac.
Ujeeddo Shingfong: Si loo bixiyo alaabada tayo sare leh iyo adeeg fiican.
Ujeeddooyinka Shingfong: Dib-u-nooleynta ganacsiga, xoojinta hufnaanta, hagaajinta shaqaalaha ee nolosha.
Mabda 'Shingfong: Si adag u raac heerka caalamiga ah ee ISO9001, deji oo sii wad hagaajinta nidaamka badeecooyinka iyo adeegga.
Warshadda tooska ah
Soo saaraha xirfadleyda ah ilaa 1995
30 Khadadka Waxsoosaarka
Twin Foors-ka-soo-saareyaasha PVC jirridda iyo marinka PVC
Miisaaniyad bil kasta ah. 50x40hq weelasha
Bixi adeeg OEM / ODM ah
In kabadan 200 oo caaryada oo kala duwan oo ah OEM
Vlog ugu dambeeyay
Loo habeeyay pvc pvc-ka ee loo yaqaan 'PVC'
Shingfong PVC pvc pvc-ga maanta soosaarayaasha ka soo baxay Shiinaha
Introto PVC Cable Shingfong
Shingfong Introto PVC Cable jirridda shingfong
Rabitaanka ugu fiican ee ugu wanaagsan ee xafladda ugu wanaagsan ee xafladda shingFong alaab-qeybiye
ShingFong Rabitaanka ugu wanaagsan ee loogu talagalay xafladda Laydhka ee ka soo baxay shingfong alaab-qeybiye
PVC-ga PVC Erayada Erayada Electrical-ka ee Weyn-Siuui Shingfong Warshadda Bacda ah ee Co., Ltd.
Shongfong PVC Erayada Electrical PVC Erayada Weelka Weyn ee Weyn ee Weyn-Siuui Shingfong Warshadda Bacda ah ee Co., Ltd.